Instagram mandefa kaonty ofisialy hanampy amin'ny famoronana atiny | Famoronana an-tserasera
Instagram dia efa naka fotoana hanaovana zavatra Izany. Ary izy dia nandefa kaonty ofisialy vaovao hahafahantsika mianatra ny tsiambaratelo sy ny tetika rehetra hamoronana atiny manokana ho an'ny tambajotra sosialy.
Kaonty iray etsy ambany ho afaka hahafantatra ianao ary natokana tanteraka izany amin'ny famoronana atiny. Izany hoe, raha mieritreritra ny hamorona fantsona ofisialy ho an'ny kaonty filalaovanao na ho an'ny sarangan'ny oniversite ianao, dia avy amin'ny perslas ity kaonty ity.
Ny kaonty dia any @ mpamorona ary manome fika toy izany 60% -n'ny mpampiasa no mijery ny Insgram Stories miaraka am-peo. Izany hoe, hametrahana feo ao anatiny mba hamelomana ireo tantara ireo ary hisy fiatraikany sy fifamofoana bebe kokoa.
Amin'izao fotoana izao dia noforonina miaraka amin'ny sary 9 ny kaonty manomeza torohevitra ary asehoy ny mpamorona sasany. Ary inona ny FAQ miaraka amin'ireo fanontaniana matetika matetika omena ato amin'ity tambajotra sosialy ity ho an'ny tantara.
Avy amin'ny fomba fampandehanana a badge ho an'ny kaonty malaza, ny fomba fampiasan'izy ireo vondrona hizaha toetra vaovao amin'ny Instagram na ny fomba fanivanana ireo hevitra tsy tianay ho ao amin'ireo zavatra vita an-tsoratra ataonay avy amin'ny kaontinay.
Una andiana toro-hevitra sy fika Izay hanampiana olona maro hafa, satria isika dia eo alohan'ny dingana voalohany noraisin'ny kaonty izay lasa axis centre, na iray amin'ireo tranonkala hitsidika, hanoritsoritana ny fahaizantsika mamorona atiny ho an'ity tambajotra sosialy ity, na amin'ny alàlan'ny sary, horonan-tsary na tantara.
tsy misy very ireo kaonty referral efatra ireo for fantaro tsara kokoa ny momba an'ity tambajotra sosialy ity lasa fironana feno izany ary izany indrindra no ampiasain'ny taranaka fara mandimby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Azonao atao izao ny manaraka ny kaonty Instagram ofisialy izay manampy ny mpamorona atiny